China ERV Okpomọkụ Iweghachite Ventilator ya na ndị na-eme ka ihe nhicha | AIR-ERV
ERV Okpomọkụ Iweghachite Ventilator na ọcha
ERV Okpomọkụ Iweghachite Ventilator na Nchacha ọ bụghị naanị wuru na-ukwuu oru oma okpomọkụ Exchanger naghachi okpomọkụ na-azọpụta ike, ma tinye isi nyo, nọ n'ọrụ carbon nyo na HEPA nyo n'ụzọ dị irè iyo ájá, nje bacteria na ndị ọzọ na-emerụ ihe na ikuku, PM2. 5 ọcha arụmọrụ bụ ruo 99,5%.
A na-eji ya maka villa, ụlọ akwụkwọ, ụlọ cafe, ụlọ nzukọ, ọfịs, ụlọ nkwari akụ, ụlọ nyocha, KTV, klọb mgbatị ahụ, sinima, okpuru ulo, ime ụlọ anwụrụ anwụ na ebe ndị ọzọ chọrọ ikuku na ịdị ọcha.
1.Sensible aluminom okpomọkụ Exchanger na enthalpy akwụkwọ okpomọkụ Exchanger maka nhọrọ.
2.Standard mgba ọkụ ma ọ bụ ọgụgụ isi njikwa maka nhọrọ.
3.Brand DC moto ma ọ bụ AC moto maka nhọrọ.
4.Three oyi akwa nzacha n'ime.
E nwere isi nyo + nọ n'ọrụ carbon nyo + HEPA nyo iji gbochie ikuku ruru unyi, HEPA nyo nwere ike n'ụzọ dị irè belata PM2.5 ma hụ na ikuku dị ọhụrụ ma dị ọcha.
1.Energy Saving: Cross eruba ume mgbake unit, akụkụ anọ ikuku ọwa, mma ume mgbake arụmọrụ, belata ikuku eruba-eguzogide.
2.High-arụmọrụ filtration: The ikuku uzo mmiri na-karị onwem na mbụ nyo na elu-arụmọrụ HEPA nyo ngwaọrụ, nke nwere ike n'ụzọ dị irè iyo ájá, nje bacteria na ndị ọzọ na-emerụ ihe na ikuku, PM2.5 ọcha arụmọrụ bụ ruo 99,5%.
3. Ngwa ntinye: Ikuku si na 50 gaa 1,000 m³ / h, kwesịrị ekwesị maka villa, ụlọ akwụkwọ, ụlọ cafe, ime ụlọ nzukọ, ọfịs, ụlọ nkwari akụ, ụlọ nyocha, KTV, klọb mgbatị ahụ, sinima, okpuru ulo, ime ụlọ anwụrụ na ebe ndị ọzọ chọrọ ikuku na ọcha.
4.Low Noise: Kachasị Ọdịdị imewe, eji ụda-adọrọ ihe na nonmetallic impeller, na-ekwe nkwa na ezi static ụda mmetụta.
5.Main Function: nye ikuku na ikpochapu ikuku n'otu oge + mgbake okpomọkụ iji chekwaa ike + HEPA nyo maka ọcha.
Dị: enwere ike ịhazi ya.
K usoro na DC moto, akwụkwọ okpomọkụ Exchanger na atọ n'ígwé iyo.
H usoro na DC moto, aluminum okpomọkụ Exchanger na atọ n'ígwé iyo.
K usoro na AC moto, akwụkwọ okpomọkụ Exchanger na atọ n'ígwé iyo.
H usoro na AC moto, aluminum okpomọkụ Exchanger na atọ n'ígwé iyo.
Ngwugwu na nzipu:
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa: katọn ma ọ bụ plywood ikpe.
Port: Xiamen n'ọdụ ụgbọ mmiri, ma ọ bụ dị ka chọrọ.
Wayzọ njem: site n'oké osimiri, ikuku, ụgbọ oloko, ụgbọala, awara awara wdg.
Oge Mbuga ozi: dị n'okpuru.
Ihe nlele Nrụpụta ọtụtụ
Ngwaahịa Jikere: 7-15 ụbọchị Ndi kpakorita
Nke gara aga: Standard Okpomọkụ na Energy Recovery Ventilator
Osote: ERD Cross & Counter Flow Okpomọkụ Exchanger
ERB Counter Flow Okpomọkụ Exchanger
Dị ọcha Box
Ductless Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na Ventilator
Ugboro abụọ Way Ventilator - ọkọnọ na exhaus ...
ERC Enthalpy Okpomọkụ Exchanger Core
Otu Vzọ Ventilator - nye ikuku ma ọ bụ exhau ...